About Us - Tianjin Da Yu caaga Products Co.Ltd
TIANJIN DA Yu alaabada balaastigga CO., LTD.
TIANJIN DA Yu alaabada balaastigga CO., LTD., Diiradda on khaanadaha-saarka iyo khaanadaha-dhoofinta tan iyo 2009-kii, waxa uu ku yaalaa degmada Baodi, Tianjin, North of China. ku saabsan 75km garoonka diyaaradaha Tianjin, oo ku saabsan 90km dekedda Tianjin Xin Gang, gaadiidka waa mid aad u sahlan.
Waqtigan xaadirka ah, waxaan leenahay nidaam kaamil ah wax soo saarka iyo tayada, lathes CNC iyo rugta maaraynta ah, gaari karaan baahida heerarka habdhiska, JIS, BS, ANSI, din. Ilaa hadda, our warshad ku Arzaaqay oo noocyo kala duwan oo soo saarka, sida khaanadaha balanbaalis, hubi khaanadaha, filtarka diaphragm, filtarka iridda, filtarka kubada, iyadoo PVDF ah, CPVC, UPVC, ABS, FRPP ama PPH qalabka iyo tuur Iron, wax ahama Steel , iyo filtarka waxaa laga heli karaa la actuators, iyo sidoo kale siin flanges, tuubbooyin, waxyaabaha kale ee la xiriira iyo adeegga OEM bixiyeen.
waxyaabaha Our hubkaas ayaa loo isticmaalaa in mashaariicda la xiriira biyaha iyo injineernimada, waraabka beeraha, qashin wasakhda, aquiculture, quraaradda, warshadaha kiimikada, Dhismaha maraakiibta, warshadaha farmashiyaha oo lagu dabaasho, zoo, park biyaha iyo beeraha kale. Iyo waxyaabaha our ayaa la dhoofiyay in ka badan 60 dal iyo gobollada sida koonfur bari Asia, Bariga Dhexe iyo West Europe, la aadka u amaanay by macaamiisha.
Iyada oo credit taagan sare, alaabta oo tayo fiican, nidaamka adeeg xirfadeed, siyaasadda qiimaha tartan rasmi ah, damaanad bixinta degdeg ah, waxaan si daacad ah sugaynaa in hirgalinaayo muddo dheer iskaashiga istaraatiiji ah mid deggan iyadoo shirkadda xurmayn.
All filtarka iyo tuubbooyin waxa soo saarey qalab wanaagsan brand-cusub.
Dhammaan tirada waxaa laga heli karaa, size ka 1/2 "20".
Dhammaan heerarka waxaa laga heli karaa sida din, JIS, ASTM / ANSI, BS, Taiwan.
OEM & LOGO FREE waa la aqbali karo